SAUERKRAUT OO LEH XAJI: KHUDBADII IMAANSHIYAHA - KAABASHKA
Sidee loo sameeyaa kaabajka dhanaan leh dhaxan: dhadhamin jiilaalka
Cuntada dhaqameed ee dabiiciga ah, hooyooyinka intooda badani waxay badanaaba ku beddelaan dhadhankaaga, iyagoo ku daraya dhir kala duwan, miraha iyo miraha. Mid ka mid ah kuwan cusub ee casriga ah waa tandem kaabajka-kelyaha. Si aad u noqoto cunto fiican, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid qarsoonaanta cuntada. Arrintani waxaynu sii wadeynaa wadahadalka.
Waa maxay nooca kaabashku ka wanaagsan yahay inuu qaato
Guudhka khibradda leh ayaa si sahlan u doorta mid ka mid ah kuwa ku habboon loogu talagalay kalluunka ama ka soo jiidashada noocyo badan oo kaabash cad. Badanaa miraha dillaacsan waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinkaas.
Ma ahan kuwo degdeg ah si ay u nadiifiyaan sariiraha, sugto madaxyada ee kaabash si ay u noqdaan casiir leh iyo sonkor. Intaa waxaa dheer, laguma talinayo in lagu keydiyo tijaabooyinka caleenta muddo ka badan 3 bilood.
Ma taqaanaa? Kaabashka cusub ayaa lagu sharxi jiray Giriigyadii hore sida calaamad muujinaysa miyir-qabka iyo maskax cad. Dhammaantoodna sababtoo ah badeecadan waxaa loo aaneeyey awooda cajiib ah si loo tirtiro khamriga khamriga.
Xaqiiqdu waxay tahay in kaabash dabayaaqadii u dhaxeeya noocyada kale ee tirada qaybaha sonkorta dabiiciga ah. Caadi ahaan, walxahan waxay gacan ka geystaan ​​sameynta nuujinta cagaarsho, taas oo ay sabab u tahay hargabku.
Akhri wax ku saabsan noocyada kaabajka ugu wanaagsan ee loo yaqaan pickling iyo pickling.
Madaxda waa in ay ahaadaan kuwo buuxa oo cufan. Waxaa muhiim ah in laga saaro caleemo cagaaran iyaga, ilaa madaxa kaabajka cad. Haddii aan la samayn, caleemaha ayaa ku kala duwanaan kara dhadhanka, dhadhanka gaarka ah iyo urta cagaarka cagaaran leh. In la tuuro "qashin" sida lagama maarmaan maahan. Qaar badan oo ka mid ah xafladaha kvass
Video: sida loo doorto kaabajka halsano
Baro sida ugu dhakhsaha badan ee kaabajka ah ee guriga.
Iyadoo ku xiran hadba sida aad u isticmaashay khudradda, iyo weelasha aad doorbideysid inaad sameysatid xarumo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso daraasadda lagama maarmaanka ah.
Xaaladdan, faa'iido leh:
mindhicirka ama mindida jikada;
baaldiyo balaastig ah oo dabool leh;
basin caag ah oo waaweyn (ujeedo cunto);
dhagax adag oo qoryo leh;
gacmo-gashi gacmeed oo nadiif ah.
Waa muhiim! Sisin iyo sonkorta waxay sahlaysaa habka bilowga. Laakiin waxaa fiican in aan iyaga u isticmaalin - kaabajka waa in ay gaaraan xaalad hab dabiici ah.
Nooca ugu caansan ee sauerkraut waxaa ku jira ku dar dabacasaha dufan, oo ka kooban qiyaastii boqolkiiba 10 kaabajka oo dhan. Hase yeeshee, lammaane kastaa waxay doortaa waxa ay rabto inay kala-jiidato qaybteeda shaqada. Qaarkood waxay ku xaddidan yihiin tufaax iyo cayayaanka, kuwa kale - qolada furan ama lingonberries, iyo kuwa kale - sinjiga iyo toonta.
Baro waxyaabo faa'iido leh ee kaabajka cad, kaabajka cas, tufaaxa, Beijing, Kaabashka Savoy, broccoli, kohlrabi, romanesco, pak choi, kale, iyo sauerkraut.
Cuntadani waxay ka kooban tahay qaybaha soo socda:
Kaabashka burbursan - 5 kg;
karootada digaag - 200 g;
cusbo - 130 g;
qabow cusub - 100 g
Haddii loo baahdo, miraha dhumucda, dabka, lafaha ama jirada ayaa lagu dari karaa si ay u dhadhamiyaan noocyo kala duwan. Qaar ka mid ah dadka jecel cuntada fudud waxay sidoo kale isticmaalaan basbaas cas.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso in aad barato cunto karinta si aad u sameysid sauerkraut iyo xididada Georgian.
Nidaamka bilowga ah ma qaadan doono waqti badan. Ka dib markaad diyaariso alaabta iyo qalabyada lagama maarmaanka ah, waxaad bilaabi kartaa wax karinta:
Marka hore, nadiifi madaxyada kaabashka caleemaha cagaaran oo biyo raaci biyo, adigoo shukumaan ku riday qalajin.
Peel karootada, dhaq oo jarjar xaddiga loo baahan yahay.
Iska dhaq sambabada oo ha qalajiyo.
Madax-madaxbannaan oo madax ku leh hab fudud. Ku rid qiyaasta dhulka ku jirta baaquli.
Kala saar kiniinka cusbo ilaa juuska ka soo baxo. Khudradda waa inay noqotaa mid jilicsan oo jilicsan.
Ku dar karootada.
Ku shub qaboojka iyo si wanaagsan isku daraan. Hantida waa in loo qoondeeyaa casiir badan.
Ku rid hoose ee baaldi caag ah oo nadiif ah, caleemaha oo dhan ka dibna ku shub masska oo dhan laga bilaabo baaquli ay weheliyaan casiir ah.
Daboolka kaabajka leh lakabka ka mid ah caleemaha kaabajka ah ee caleemaha sare, ku rid baaquli kor iyo hoos nooc oo dulmi ah (shay kasta oo culus ayaa ciyaari kara doorka). Haddii aad rabto, waxaad isticmaali kartaa maro cadaan leh, laakiin ha ilaawin inaad si joogto ah u dhaqdo. Taangadu waa inay ahaataa meel kulul.
Mustaqbalka, kormeer xaaladda xaaladda shaqada iyo, ilaa inta lagama maarmaanka ah, ka saar xumbada ka muuqata dusha sare. Tani waa calaamad cad oo ah bilowgii hannaanka hargabka.
2-ta maalmood ee ugu horreeya ilaa 5 jeer goobo dhowr ah ayaa kufilmaamaya kaabajka, sii deynaya gaasaska. Haddii kale, goosashada ayaa ka daadi doona urta aan fiicnayn waxayna noqon doontaa mid aan ku haboonayn isticmaalka. Tani waa in lagu sameeyaa ul alwaax ah oo leh dhamaystir leh. Waxaa muhiim ah in qalabku nadiif yahay (nidaamku waa soo noqnoqonayaa illaa uu ka dhacayo gaasku).
5 maalmood ka dib markaad xarigga xiirto ayaa laga saari karaa kaabash brownish ah laga soo saaro dusha sare. Haddii loo baahdo, qaybta shaqada waxaa loo wareejin karaa bangiyada, si adagna u riixdaa.
Waa muhiim! Ha ku darin foosto si aad u kaydiso, sababtoo ah qaybtaani waxay gacan ka geysataa in si dhaqso ah ay uga sii darto qaybta shaqada..
VIDEO: Cunto kariska la kariyo
Waxa aad u dalbaneyso miiska
Kuwo badan oo jecel isweydaarsiga iyo fududaynta cagaarka. Waxay ku haboon tahay sida bilowga koorsooyinka koowaad iyo labaad, iyo sidoo kale qayb ka mid ah diyaarinta sheekooyinka culuumta cusub. Qaybtani waxay lagama maarmaan u tahay solyanka, kaabajka, borscht, canjeelada, bakeeryooyinka, vinaigrette, kulebeaka, boodboodka iyo daadinta kala duwan.
Xilliga jiilaalka, gurigeyga ayaa badanaa isticmaala baaldigan sida salad saladh. Oo waxaad ku dartaa labadii cagaar, Iyo hilib, iyo kalluun. Dhaqan ahaan, kalluunka waxaa lagu daraa baradho la shiiday. Laakiin haddii aad ka baxdo jaranjarooyinka, waa wax aad u wanaagsan in aad haysatid fuudka sauerkraut, khudradda cagaaran iyo firileyda.
Cuntooyinka qaar waxay dubaan dubey, shiil ama karkariyo. Hase yeeshee, nafaqada ayaa si xoog leh ugu talagaleysa isticmaalka sheyga ee qaabkeeda cayriinka ah, tanina waa sida ay u hayso nafaqooyinka sida ugu macquulsan.
Xaggee iyo intee in la kaydin karaa
Inta lagu jiro halsano, sheyga waa in uu ahaado heerkul ah 18 ... 20 degrees Celsius. Ka dib shan maalmood ka dib, marka xumbadu joogsato dusha sare iyo brine waxay noqotaa mid hufan, waxaa loo wareejin karaa qabow iyada oo qaabka ugu wanaagsan ee ah 0 ... +5 degrees Celsius.
Waxaan kugula talineynaa in aad barato hababka diyaarinta jiilaalka cas, caddaan, tufaaxa, sprouts, broccoli xilliga qaboobaha.
Bilawgaas waxaa la kariyaa qaybo ballaaran, maaddaama haddii xaaladaha lagama maarmaanka ah la gaarsiiyo, waxaa la keydin doonaa waqti dheer iyada oo aan wax khasaare ah ama caaryar lahayn. Kaydinta ugu fiican ee meelaha banaan sida waa maqaasiinka, sababtoo ah waxaa jira nidaam heerkulka ku haboon iyo qoyaan.
Intaa waxaa dheer, kaabajka ma ahan in ay iftiinka qoraxda. Xaaladaha guryaha, goobta ugu fiican ee lagu kaydiyo waxay ahaan lahayd qaboojiyaha ama balakoonka (kiis dambe, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo xaaladaha cimilada). Si loogu kaydiyo cunto fudud oo wanaagsan, dadka guryaha leh waxay kugula talinayaan inaad buuxisid weelasha leh cabbitaanka kaabajka ah si ay brine u daboolaan - tani waxay kordhinaysaa nolosha shelf. Xaqiiqdii, acid ascorbic wuxuu si dhakhso ah u uumi baxaa maqaarka la jajabiyey ee foomka dhaantada.
Ma taqaanaa? Suuqyada Roomaaniga, kaabajka ayaa u muuqday oo keliya fasaxyada oo kaliya oo la kariyey. Isbedelka dhadhanka, khudradda ayaa badanaa lagu baakadeeyaa dhir kala duwan..
Mararka qaar da 'yarta da' yarta ah ma yaqaanaan waxa ugu fiican ee loo kariyo saxanka. Dabcan, dhalooyinka saddex-litir ah ayaa ku habboon kaydinta. Iyo diyaarinta waxay ka wanaagsan tahay qaadashada taangiyo ballaaran.
Waxay noqon karaan kuwo dhalaalaya, caag ah, bir ah, dhalo. Waxa ugu muhiimsan waa in si haboon u hoggaansamaan dhammaan xaaladaha kaydinta alaabta. Ha iloobin inaad si joogto ah u booqato kaabajka oo aad u hubiso caaga (tani waxay dhacdaa marka xad-dhaafka guud ee tiknoolojiga wax lagu kariyo iyo kaydinta haboon).
Ogsoonow in lagu daro qaboojiyaha loo yaqaan 'sauerkraut' waa hal dariiqo oo looga hortago caaryada.
oo ku daraya caato;
rusheeyaha xilliga sonkorta;
ku dar faaruus macaan ah;
isagoo intaa ku daray in la gooyey qajaar la jarjarey.
Sida caadiga ah waa suurtogal in la oggolaado in biilkaada la barafeeyo. Xaaladaha ugu habboon, waxay u taaganaan doontaa nuska sano. Inkasta oo ay shaki ku jirto, dhirbaaxadu waa mid aad u dhadhan, bil gudahana waxba kama tagi doono.
Ma taqaanaa? Kaabashka marka hore wuxuu bilaabay inuu cuno Shiineeys. Oo waxay ku sameeyeen khamri. Oo addoommadii Sulaymaanna waxaa lagu quudhsaday nadiifinteeda aawadeed intii lagu jiray dhererkii xoogga badnaa ee Shiishiimaa ee gobta ahaa.
Haddii aad xajinayso kaabajka sida ku xusan qaacidada kor ku xusan, ka dibna waad iska hubin kartaa in aad yeelan doonto baalal aad u fiican oo boodh ah. Isbeddel yar oo ka mid ah maaddooyinka kore ee maaddooyinka ayaa la oggol yahay, iyadoo ku xiran doorbidaadda gastronomiska. U fiirso naftaada: waxaa si dhakhso ah loo kariyey, si fudud, laakiin waxa soo baxday wax macaan ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kaabashka 2019